Diraasad: Sujuudda iyo Rukuucda waxay daweeyaann dhabar Xanuunka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 9, 2017 297 0
Diraasad cusub oo ay soo saartay majallad ka faalloota Nidaamka farsamada iyo warshadaha ayaa lagu sheegay in dhabar xanuunka ay dareemaan inta badan dadka lagu daweyn karo qaababka Rukuucda iyo Sujuudda haddii lala yimaado qaabka ugu saxan ee Rukuucada iyo Sujuudda.
Diraasaddu waxay sheegtay in salaaddu aysan daweyn xanuunada jirka oo kaliya, balse sidoo kale ay dawo wanaagsan u tahay dhabar xanuunka, hadiiba lala yimaado rukuucada iyo sujuudda qaababkooda ugu saxan ee Shareecadu na amartay.
Diraasadan oo ay ka qeyb galeen khubaro iyo macalimiin wax ka dhiga Jaamacado Caalami ah ayaa lagu ogaaday in dhabar xanuunka lagu daweyn karo salaadda, waxana diraasadu sidoo kale ay sugtay xaqiiq jirta oo diinta Islaamku sheegtay oo ah in murugada iyo wal walka badan lagu daweeyo salaadda.
Diraasadda waxaa loo adeegsaday Computero caafimaad oo si toos ah u muujinaya dhaq-dhaqaaqa iyo falgalka qeybaha kala duwan ee Jirka marka salaadda la tukanayo gaar ahaan marka uu qofku rukuucayo ama sujuudayo.